Akụkọ Jonathan Low na Martech Zone |
Edemede site na Jonathan Low
Jonathan Low bụ otu n'ime ndị ọchụnta ego ama ama na ndị ode akwụkwọ azụmaahịa Denmark. Løw bụ ngalaba-nchoputa nke Akụkọ Jump, Igwefoto foto nke dabeere na AI nke a na-akpọ "Netflix nke ihe oyiyi." JumpStory nwere ndị ahịa ugbu a karịa mba 150 ma na-eto ngwa ngwa.
Otu esi ewupụta ezigbo akara
Ndị isi ahịa ahịa nke ụwa na-egosipụta ya n'ụzọ dị iche iche, mana ha niile kwenyere na ahịa dị ugbu a tozuru oke na echiche, ikpe, na akụkọ ịga nke ọma dabere na ụdị mmadụ. Okwu ndị dị n'ime ahịa a na-eto eto bụ ezigbo ahịa na ụdị mmadụ. Ọgbọ dị iche iche: Otu olu Philip Kotler, otu n'ime nnukwu ndị nwoke na-azụ ahịa, na-atụgharị ihe ịtụnanya Marketing 3.0. N'akwụkwọ ya nwere otu aha ahụ, ọ na-ezo aka na ndị na-ahụ maka ahịa ahịa na ndị na-ekwurịta okwu nwere "The